Shuruudaha doorashada xalka GIS / CAD - Gofumed
Shuruudaha Doorashada xal GIS / CAD
Luulyo, 2008 ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, GvSIG, IntelliCAD, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley
Maanta waxay aheyd maalintii aan isweydiiyay inaan soo bandhigo kooraska dabiiciga ah ee Bolivia. Mawduuca waxaa loo jeedaa si loo eego sida loo doorto qalabka kombuyuutarka horumarinta jimicsiga.
Tani waa garaafka aan isticmaalo, habkayaguna wuxuu ahaa falanqaynta macnaha guud ee aan rajeyneyno inaan hirgelino xalka.
Ujeedadu waxay tahay in haddii aad rabto in aad doorato aalad fudud qabashada xogta waa in ay tixgelisaa dhinacyo in ay leeyihiin in ay kaliya sameeyo leh awood uu ku fallaadhaha, laakiin waaritaanka in u adkeysan karaan ilaa xad in loo baahan yahay by users waxay ka helaan heerar kala duwan iyo tirada dadka isticmaala kuwaas oo u baahan doona liisanka.
Qaar ka mid ah shuruudaha aan tixgelinnay, miisaankoodu wuu kala duwanaan karaa iyadoo ku xiran xaaladda macnaha guud ee dalka ama waddanka, waxaa kaloo loo tixgelin karaa:
La shaqeyn karo
Xawaaraha Speed. Tirada dadka isticmaala
Koritaanka caadiga ah
Helitaanka isku-xirnaanta dhexdhexaadinta (API)
Kadibna waxaanu u kala qaybinay qaabka juqraafiyeed ugu yaraan lix marxaladood oo miisaamaya heerka muhiimadda shuruudihii hore waqtiyo kala duwan. Mid kasta oo ka mid ah marxaladaha waa la soo xuli karaa liiska gaarka ah ee dadka isticmaala ama takhasuseyasha soo jeediya, kuwaa waxaa la siiyaa miisaan si loo qiimeeyo hab isbarbardhig ah faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka xalalka kala duwan:
1. Marxaladda dhismaha
Tani waxay asal ahaan ayaa la filayaa inuu xal wax ku ool ah oo wax ku ool ah wax soo saarka heer sare ah by farsamo duurka ka yimid, marsiiyey, topology nadiifiyaa, database-dhafan oo la macaamilaan images ama adeegyada map.
2. Marxaladda maamulka
Tani waxaa loo tixgeliyaa, in xogta la soo saaro loo gudbin karo heerarka sida in lagu aqbalo xogta xogta ama maamulaha faylka ah. Qodobada sida joogteynta qaabka iyo API la heli karo waa mid aad muhiim u ah. Dabcan, xal loo raadinaayo heerka this ee maamulka database ayaa la filayaa inuu interfaces more soo jiidasho, waxay yeelan karaan qaab fiican oo jawi multiuser oo awood u leh inay kaydka xogta geometry iyo tabular labadaba sida jirrabo raster.
4. Marxaladda daabacaaddaHeerkan loo arko in xogta xal dhismaha ayaa fursadaha badalka heerarka iyo qalab adeeg Nice halkaas xogta leeyihiin heer a of ahaanayta si labada shaqayn karo xogta iyo sidoo kale suugaan eegi racfaan.
5. Marxaladda dayactirka, tani waa heer labaad oo dhismo ah, taas oo la filayo in qalabku uu leeyahay fursad uu ku xakameyn karo helitaankooda ku saabsan ilaalinta natiijooyinka la taaban karo, kaydinta taariikhda isbeddelka iyo mar labaad, sahlanaanta dhismaha saxda ah. Haddii ay suurtogal tahay ikhtiyaarka ah in la sameeyo faahfaahin garaafeed oo hoos imanaya firfircoonida internetka ka shaqeeya ... si ka fiican.
6. Marxaladda samafalka, Waxaan ugu baaqay in, laakiin dhab ahaantii waa marxaladda bakhaar-gelinta, taas oo dadka isticmaala ee ku jira xaruntan, helayaan xogta, taageerada iyo soo saaraan alaabta cusub. Halkaan waxaa ah shuruudaha CAD / GIS xal u helkartaa qaabka xasiloonida iyo awoodda lagu taageerayo qaabaynta, halka qalabka maareynta, kuwaas oo haysta fursado badan oo horumarineed, heerarka amniga iyo hawlaha macmiilka macmiilka.
3. Heerka sarrifka, tani waa heerka labaad ee daabacaadda, taas oo laga filayo in ay u adeegto xogta xml, gml ama qaabab kale oo ay taageeraan heerarka ogc, alaabooyinka aan rajeyneyno ayaa loo isticmaali doonaa xalal kale oo geomatik ah laakiin sidoo kale soo noqnoqonaya. Waxa la yidhaahdo, awood u leh in ay ku jahawareeraan heerarka geofumed, oo ay ku jiraan ikhtiyaarka xeeladaynta vector ... Haa, geofumados wanaagsan.
Inkasta oo mabda 'ahaan ay tahay in la adeegsado imtixaan u gaar ah xalalka xalalka kala duwan marxalad kasta oo hawleed ah, waa in aynaan ilaawin macnaha kalifka; sidaa darteed waxaan ku soo gabagabeeyey la jimicsi deg deg ah ay dhacdo in qofka macaamilka weyn, sida machadka ah ee dalka dal, aad rabto si ay u hirgeliyaan nidaam dhamaystiran deegaanka ah oo ku saabsan 20 farsamo-soo-saarka CAD / GIS, horumarinta 3, users 75 Intranet iyo wada tashiyo badan oo online ah (waxaan ku soo celinnay kharashka Oracle ee $ 30,000 halkii sannadkii, qalabka kombuyuutarka, qalabka iyo hirgelinta):
Samee AutoDesk waxay ku kici kartaa $ 180,000, iyada oo la xaddidayo marxaladda xajinta ee ay tahay in ay la socoto noocyada kale iyo waxqabadka ilaha qalabka si ay ugu adeegaan xogta si wax ku ool ah iyo ujeeddooyin wax-u-qabasho dambe ah.
Samee Bentley wuxuu ku kici karaa ilaa $ 210,000, iyada oo xaddidnaanta marxaladda is-weydaarsiga, daabacaadda laga soo qaado timaha iyo wax-ku-oolka waxbarashada
Samee ESRI waxay noqon kartaa $ 300,000, iyada oo xaddidnaanta marxaladda dhismaha iyo qashin-qubka, maxaa yeeley waxa ku jiri lahaa isku-daboolida noocyo kale; oo aan ahayn habka laga yaabo inay soo baxdo in shatiyada 10 loo baahan yahay kordhin ah oo u dhiganta $ 9,000
Samee Manifold wuxuu ku kici karaa $ 15,000, iyada oo la xaddidayo marxaladda dhismaha, curenta barashada iyo baahida loo qabo horumarinta fasalka koowaad (inkastoo kiisaska oo dhan ay jiraan waxyaabo badan oo lagu hormarinayo). Waxaan sidoo kale caddaynayaa in ay jiraan xalal kale oo qiimo jaban, laakiin waxaan u adeegsanayaa tan sababtoo ah waxaan isku dayay waqtiyadii dambe waana la yaabay.
Xaaladda ugu xumayd waxaan haystaa $ 155,000 si ay u shaqaaleyso buugaagta wanaagsan iyo haddii aan la ciyaaro ruqsadaha runtime waxaan isku dayi karaa macaamilka macmiilka.
Waa funny in ku dhowaad wadarta la qaban karo software bilaash ah, Ka daahirane GvSIG / Grass, Postgre, IntelliCAD iyo caleemo kale haddii aan dhexgalaan kartaa koox habaynta ee geedi socodka, horumarinta geofumados iyo kalsoonidii inay iska iibiso mashruuca ... haddii macmiilku ka fikiray $ 700,000 ... waxaan ku dhuftay kartaa wax adag, sababtoo ah ee sare waa qadarka isticmaalaha waxaa lagu sababi karaa barnaamijka bilaashka ah ee bilaash ah ama kharash yar.
Marca Qalabka dhismaha Maamulka Daabacaadda Dib u celinta Intercambio
+ dheeraad ah Navis Works? + Topobase horumarinta duurka
Bentley 7 Map Map
2 Geopack Oracle 10G Wargeyska Geoweb + wada shaqeeynta
+ khariidadaha Mashruuca mashruuca Wise mmm ... in la ooyayo ayaa la yiri
GIS Server GIS Server ee processor ah uuuuy
kala cayncayn ah Horumarka dheeraadka ah
20 Liisaska Universal Manifold Manifold EnterpriseOracle 10G Maalinta Shaqada Universal Ugu dambeyntii Runtime Maalinta Shaqada Universal
Soo koobid, waxaan rajeynayaa inaan ka soo kabtay rabitaankaaga ku saabsan xalal bilaash ah iyo qiimo jaban, inkastoo wakhtigu ahaa mid aad u gaaban si aad u sii socoto. Waxaan qeexnay gabagabadii kooban:
Tiknoolojiyada saxda ah waa: "taas oo noqon karta mid sii waaraya"Gudaha caalamiga ah ee horumarinta
Ma jiri karto tiknoolajiyad "wax kasta oo wanaagsan"
Qodobka "dhaqaalaha" waa in lagu fekero marka la eego "wareegga nolosha tiknoolajiyada"Iyo wada shaqeynteeda
Nidaamka diiwaansan (nidaaminta) kordhinta wareegga nolosha ee teknoolajiyada
Dhammaan maahan diyaar u ah barnaamijka bilaashka ah, si loo bilaabo codsiyada ayaa la doorbidaa "ganacsi", Iyadoo waayo-aragnimada aad ka fekereyso codsiyada"kharash yar", iyadoo la socota dareenka"bilaash"Ama" leedahay "
Post Previous«Previous Haa waa suurtogal in la muujiyo Google Earth oo muuqaalka sawirada kor ka muuqda waqtiga dhabta ah
Post Next Google waxay geli kartaa aduunka oo dhanNext »
4 Jawaab ah "Shuruudaha doorashada GIS / CAD"
Oscar Sanchez isagu wuxuu leeyahay:
Saaxiibkee iyo lacagkee ayaa ah qarashyadan?
haddii aan mar hore soo bandhigay sicirrada suuqyada, waxaan u maleynayaa inaad macnaheedu tahay mid ka mid ah boostada
trombone isagu wuxuu leeyahay:
Hello, anigu ma ogaanayo haddii aan si fiican u xasuusto laakiin miiskaas oo leh kharashyada goobaha kala duwan, Waxaan arkay muddo dheer ka hor taariikhda halkaa ka muuqata, ma garanayo Haddii aad cusbooneysiisay, ama waxaan ku arkay bog kale